खोपडी को Warty nevus
को warty nevus के हो? यो dermal ओठ कसरी खतरनाक छ? तल उल्लेख गरिएको रोगहरु बारेमा यी र अन्य प्रश्नहरू मा, हामी प्रतिक्रिया हुनेछ।
Verrucous nevus छाला मा एक सौम्य प्रकार गठन छ। यसलाई जो रोगन को एक ठूलो राशि, समावेश melanin novotsitov हुन्छन्।
शब्द "तिल" ल्याटिन मूल naevus छ। रूसी अनुवाद, यो जस्तै सुनिन्छ "तिल।"
सामान्य मा, त्यहाँ छाला दाग (birthmarks) को विभिन्न प्रकारका छन्। तिनीहरूले छ, तिनीहरूले पछि देखा जीवनका धेरै पहिले दिन देखि सजिलै देखिने छ, जन्मजात हुन, र प्राप्त गर्न सक्छ। यी formations को वर्गीकरण धेरै व्यापक छ। तर, सबै भन्दा साधारण हुन्छन्: papillomatous (खोपडी वा warty nevus), र भित्री dermal dysplastic।
warty nevus गठन किन छ? धेरै विशेषज्ञहरु कि उमेर देखा पर्न ती सहित लगभग सबै यस्ता संस्थाहरू, एक जन्मजात छाला कमजोरीहरू छ भनेर याद गर्नुहोस्। वैज्ञानिकहरू अनुसार, ट्यूमर विकास गर्न नेतृत्व कि disturbances, त्यहाँ अझै पनि एक भ्रूण स्तरमा छन्।
यस्तो protrusions को प्रमुख कारक समावेश:
सेक्स हर्मोन (एस्ट्रोजन र progestin) एक गर्भवती महिला मा उतार चढाव;
एक गर्भवती महिला मा genitourinary सिस्टम को संक्रामक रोगहरु;
एक गर्भवती प्रतिकूल कारक को शरीर मा प्रभाव;
यी सबै कारक, अर्थात्, कक्षहरू पछि melanocytes गठन melanoblast कि विकासात्मक विकार गर्न सक्छ। त्यसपछि, तिनीहरूले छाला केही भागहरु मा जम्मा र nevotsity मा रूपान्तरित। उत्तरार्द्ध सुविधाहरू निम्न मानक melanocytes फरक:
तिनीहरूले जो द्वारा रोगन अन्य कक्षहरू फैलियो सक्छ प्रक्रियाहरू कमी;
रोगी को जीव को verrucous nevus dysplastic बुरा obeys नियामक प्रणाली, तर, क्यान्सर कक्षहरू गर्न यसको विपरीत, यो क्षमता पूर्णतया उपयोग छैन गुमाएको छ।
के कारणहरूले अझै पनि warty nevus, यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ फोटो जो उत्पन्न हुन सक्छ? यस्तो शिक्षा अक्सर को परिणाम छ:
हर्मोनल शरीर परिवर्तन। यो विशेष गरी किशोरों साँचो हो।
मानव छाला मा पराबैंगनी रेज को कार्य। सूर्य वा धूपघडी गर्न बारम्बार र लामो अनावरण गाढा स्थलहरू को वृद्धि विकास गर्न योगदान।
गर्भावस्था। माथि उल्लेख रूपमा, यो हर्मोन को घटबढ कारण हो।
निरोधकों को सेवन।
भडकाऊ र एलर्जी छाला विकार (जस्तै, मुखासे, dermatitis, विभिन्न rashes)।
टाउको मा Papillomatous verrucous nevus
के अरूबाट papillomatous nevus distinguishes? यो धेरै papilloma जस्तै छ जो छाला, माथि फैलएको, सौम्य छ। अक्सर, यस्तो प्रक्षेपण टाउको मा स्थित छ। यो जन्मजात वा प्राप्त हुन सक्छ।
कारण melanoma गर्न परिवर्तन papillomatous nevus जोखिम सानो छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, यस प्रकारको जन्म चिनो melanomoneopasnym गर्न श्रेय। यसको घटना को कारण के हो? विशेषज्ञहरु यस्तो शिक्षा एक व्यक्ति एक आनुवंशिक सुविधा छ भन्छन्।
Warty nevus, टाउको मा स्थित एक दांतेदार आकार र ऊबड सतह छ। उहाँले छाला को स्तर माथि rises र hairs ढाकिएको गर्न सकिन्छ।
यो शिक्षा रंग - खैरो वा खैरो। कहिलेकाहीं यो स्वस्थ छाला फरक छैन। यो पनि यस एकल वा बहु को गठन छ, र अक्सर धेरै ठूलो आकार पुग्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
यस्तो verrucous nevus जन्मजात Moles को एउटा रुप हो, र लगभग एक malignancy मा रूपान्तरित कहिल्यै।
अब सम्म, विशेषज्ञहरु birthmarks यस प्रकारको को कारण पहिचान छैन। त्यहाँ यस्तो protrusion आनुवंशिक विकारहरु कारण छाला माथि हुन्छ कि asserts जो एक परिकल्पना छ तापनि।
Intradermal nevi एक domed उपस्थिति छ। कहिलेकाहीं यो "खुट्टा" मा र आकार अवस्थित गर्न सकिन्छ Blackberries सदृश।
यस्तो रंग गठन प्रकाश देखि खैरो वा पूर्ण कालो गर्न फरक हुन्छ। यसको आकार केही सेन्टिमिटर भन्दा कम पुग्छ।
nevus यस प्रकारको धेरै र एकल छ। यो भन्दा सामान्यतः घाँटी र अनुहार मा स्थित छ। दुर्लभ अवस्थामा, यो protrusion छाला को अन्य क्षेत्रहरु मा देखिन्छ।
Melanocytic nevi, dysplastic
यस्तो शिक्षा अक्सर atypical जन्म चिनो भनिन्छ। यो क्यान्सर, अर्थात् melanoma एक precursor छ।
दुवै sexes पाइने एउटै प्रतिशत यसको। 12-15 वर्ष मा उत्पत्ति, को प्रक्षेपण नयाँ स्थान बनाउन, एक पाकेको बुढ्यौली शरीर अप बढिरहन्छ।
एक व्यक्तिको उमेर, लिङ्ग र यूवी रेज को व्यक्तिगत धारणा यो गठन को उपस्थिति मा कुनै प्रभाव छ। तिनीहरूले autoimmune च्यानल जन्मजात छन्। अन्तर्गत melanoma मा सूर्यका वा पराबैंगनी warts यस्तो पुनरुत्पन्न गर्न बलियो जोखिम।
यो पनि लिनेहरू immunosuppressants मा एक घातक ट्यूमर एक nevus को परिवर्तन को एक उच्च जोखिम छ।
कि एकाइ को एक विशिष्ट लक्षण यसको दोहरी संरचना कार्य गर्दछ। Melanocytic nevus warty अक्सर खोपडी मा हुन्छ। उहाँले अलिकति उठाएको छ केन्द्रीय भाग, जो को धमिलो सीमाहरु संग परिपत्र स्थलहरू एक प्रकारको छ।
यस्तो गठन रातो-गुलाबी वा कालो-खैरो रंग हुन सक्छ। यसको आकार5मिमी पुग्छ।
अक्सर, यो प्रक्षेपण गुणन देखिन्छ। प्रायजसो, यी ठाउँहरू छाला को ती क्षेत्रमा सूर्य (जस्तै, खोपडी, कम खुट्टा फिर्ता, छाती, जनन र चाक) द्वारा कवर छन् मा अवस्थित छ। धेरै शायद छलफल melanocytic nevus अनुहार मा गठन गरिएको छ।
एक warty nevus कसरी निको पार्न गर्न? हटाउने - बस यस्तो विधि परम्परागत चिकित्सा र cosmetology प्रदान गर्दछ।
resection को गठन व्यवहार गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय र किफायती तरिका हो एक शल्य स्केलपेल। यो प्रक्रिया को मुख्य बेफाइदा यसको कार्यान्वयन पछि scars रहने छ। साथै, यस्तो सञ्चालन एकदम दर्दनाक छ। केही अवस्थामा, घातक dysplastic nevi मा सहित, यो विधि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।
अझै पनि केही तरिका Moles हटाउने cryotherapy छ। यो यस्तो तरल नाइट्रोजन वा सुक्खा बरफ रूपमा refrigerants को प्रयोग पनि समावेश छ। एक कम तापमान nevotsity को प्रभाव अन्तर्गत पहिलो स्थिर र त्यसपछि मर्छन्।
birthmarks छुटकारा गर्न Kriolechenie विपरीत बाटो electrocoagulation छ। सञ्चालनको यसको सिद्धान्त रोगन कक्षहरूको एक कटरीकरण आधारित छ। यस कार्यका अत्यन्तै पीडादायी छ, र यसैले एनेस्थेसिया प्रयोग आवश्यक छ।
त्यहाँ nevi उपचार को अन्य तरिकाहरू छन्। यी लेजर हटाउने र स्थान जोखिम समावेश गर्नुहोस्। यस्तो विधि को लाभ प्रक्रिया को गति, एनेस्थेसिया को अभाव, scars, पीडारहित छन्।
गार्डनर सिंड्रोम के हो?
सर्वश्रेष्ठ लिएको छ sinusitis र sinusitis लागि एन्टिबायोटिक के हुन्?
Pancreatitis के हो
Argyll-Robertson सिंड्रोम: कारण, लक्षण, उपचार
कोरोनरी मुटुको रोग curable छ!
फोक्सो सुनिंनु, यो रोग को उपचार
लोबेईङ - यो के हो?
हंगेरी - कुन देश? हंगेरी को गणतन्त्र। हंगेरी
Carpal टनेल सिंड्रोम
"सेतो सारस" - साँचो Gourmets लागि रक्सी
लियोनिद Menaker: Filmography
Gloxinia: पत्ती प्रजनन। Gloxinia: वर्णन, प्रजनन, मर्मतसम्भार, रोपण
प्रसारण "बेलुन" Grebenshchikov - देश रक मा एउटा यात्रा
झोला ट्रोले पाङ्ग्रेमा। बैग बोक्न
कसरी अनिद्रा को छुटकारा प्राप्त गर्न - शास्त्रीय र परम्परागत चिकित्सा को दृश्य को बिन्दु
विविधता र उद्देश्य अपरेटिङ सिस्टम